India: Famandrihan-toerana, Lalàna, Bollywood, Voanjo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2017 17:46 GMT
(Marihana fa lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Martsa 2007 ity adika eto ity)
Hatramin'izao, amin'ity volana ity, ny lohahevitra lehibe amin'ny fifanakalozan-kevitra virtoaly ao India dia ny amboara manerantany amin'ny lalao cricket ao Antilles. Satria voahilika mazava amin'ny amboara manerantany i India ankehitriny, nitodika tamin'ny olana hafa ny sain'ireo bilaogera.
Omaly, natsahatry ny Fitsarana Tampony Indiana vetivety ny fametrahana ny anjaran'ny Kilasy Hafa Tratra Aoriana (OBC na KHTA) na ny asa fanamafisana ao amin'ny toeram-pianarana ambony. Nilaza amin'ny ankapobenyy ny Fitsarana Tampony fa tsy ampy ny tahiry azo momba ny isan'ny mpianatra KHTA.
Sahirana ireo bilaogera nanoratra momba ity lohahevitra mafana ity.
Rahul Gaitonde ao amin'ny 2 Paisa worth nanoratra fa aloha loatra ny fankalazana momba ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Tampony, ka hoy izy:
Milaza izy ireo fa ny Komonista no manana atidoha tsara indrindra ao amin'ny Parlemanta. Eny, nanao resaka tena mahery i Prakash Karat androany, raha nanohitra ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Tampony izy, nanajanona ny 27% amin'ny famandrihan-toerana ao amin'ny Ivon-toerana Fampianarana ambony.
Nanana teny mahery momba ny didim-pitsarana ihany koa ny Antoko Komonista an'ny India-Marksista miaraka amin'ny sekretera jeneralin'ny antoko Prakash Karat, miantso izany ho ‘mampalahelo sy tsy misy fotony.’
Nilaza izy fa efa fanjakana maromaro sahady no nanao famandrian-toerana mifototra amin'ny lisitry ny KMTA, na dia ao amin'ny tolotra Foibe aza ary nanontany hoe inona ny olana amin'ny fanitarana ny toeram-pianarana.
Tao amin'ny bilaogy antsoina hoe Lalàna sy Zavatra Hafa, nanoratra izy ireo hoe:
Mbola aloha loatra raha haneho hevitra momba izay nolazain'ny Fitsarana Tampony – mety hoe tsy maintsy miandry elaela isika alohan'ny hivoahan'ny fanadihadiana mazava amin'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana, rehefa nanana fahafahana mamaky ny tena lahatsoratry ny didy navoakan'ny Fitsarana ny olona.
Misalasala amin'ny didin'ny Fitsarana Tampony i Nipon ao amin'ny BongBuzz ary nanoratra hoe:
Tafahoatra ho an'ny Fitsarana Tampony! Tafahoatra ho an'i India! Monina eto India, ahoana no anantenantsika rariny? Ity no tany hitohizan'ny famindrahan-toerana mifototra amin'ny saranga ary hanohy hanangona tombontsoa ara-politika amin'izany i Lalsu Prasads sy ny rehetra. Misy fomba tokana ivoahana – mandao ny firenena!
Avy amin'ny bilaogin'ny Fitsarana Tampony, hifindra ho any amin'ny Bollwood isika sy Bombay sy ny fomba ahatakarana izany rehetra izany? Angamba any amin'i Mark Emmert, Filohan'ny Oniversiten'i Washington ny valinteny. Mitsidika an'i India izy amin'izao fotoana izao ary manoratra hoe:
Ankehitriny aho mahatakatra tsara kokoa ny antony mampalaza tokoa ny sarimihetsika Bollywood malaza loatra aho ankehitriny. Mifanaraka amin'ny halaky, ny gadona, ary ny melôdrama an'i Mumbai mihitsy izy ireo. Mampitabataba ny zava-misy sy mitondra vinavina: Olona fito tapitrisa no mitaingina fiaran-dalamby mankany Mumbai isan'andro. Mihevitra hitondra an'i Chicago manontolo amin'ny fiaran-dalamby isaky ny maraina sy hariva. Mangina ankehitriny i New York raha oharina amin'ny hetsika mitohy ao Mumbai.
Efa mba nandre ny voanjo Komonista sy voanjo Kaongresy ve ianao? Eny ary, misy fivarotana any Bangalore izay mivarotra voanjo nomena ny anaran'ny Komonista sy ny Kongresy (antoko politika tranainy indrindra ao India) izay mivarotra izany. Jereo ny horonantsarimihetsika ary ho hitanao ny fomba nahazoan'izy ireo ny anaran'izy ireo.